Fantson'ny IPhone | Vaovao IPhone
Fantson'ny IPhone Betsaka ny eny an-tsena, na dia ny mandroso indrindra ihany aza no mankafy ireo rindranasa matanjaka indrindra na ireo fiasa farany tafiditra ao amin'ny iOS, ny rafitr'izy ireo. Hatramin'ny 2007, taranaka maro an'ny telefaona Apple no nivoaka: EDGE, 3G, 3GS, 4, 4S ary, ny maodely farany niseho, ny iPhone 5 Manome vatana unibody aliminioma sy efijery efatra metatra izy io, ary mihoatra ny voalohany ny 3,5 santimetatra mahazatra izay efa hitantsika hatramin'izay.
iPhone 14: ny fakan-tsary eo anoloana sy ny revolisiona lehibe
Tamin'ity taona ity, efa nisy boky marobe nanoro hevitra fa i Apple dia hiasa amin'ny fanavaozana lehibe ho an'ny fakan-tsary eo anoloana ny vaovao…
Apple dia hamela anao hampiasa ny fakantsary iPhone ho webcam amin'ny macOS
ny Angel Gonzalez hace Herinandro 3 .
Apple dia nanolotra zava-baovao izay nandrasan'ny mpampiasa maro hatry ny ela: ny mety hampiasa ny fakantsarin'ny iPhone ho…
Gurman dia nanamafy izany: ny iPhone 14 Pro dia hanana Aseho foana
ny louis padilla hace Herinandro 4 .
Vao avy nanambara izany i Gurman tao amin'ny gazetiny isan-kerinandro: iOS 16 dia hampiditra fanohanana ny Always On Display,…
Ny dikan-teny vaovao dia mampiseho ny famolavolana ho avy amin'ny iPhone 14 Pro
Mitohy ny tsaho sy ny fivoahana momba ny iPhone 14 Pro, indrindra raha jerena fa te hampiroborobo ny Apple…
Ny tsaho momba ny famolavolana iPhone 14 vaovao dia ny filaharan'ny andro. Ny tonika dia ...
Ny iPhone 14 dia eo am-bavan'ny rehetra tato anatin'ny herinandro vitsivitsy. Ny mety ho endrika ivelany vaovao sy zava-baovao...
Ny iPhone 14 dia hitondra fanatsarana lehibe amin'ny fakan-tsary eo anoloana araka ny filazan'i Kuo
ny alex vincent hace 2 volana .
Ny tsaho momba ny fanatsarana ny fakantsary izay ho entin'ny iPhone 14 dia tsy miova tato anatin'ny volana vitsivitsy…
Ny sary voalohany amin'ny famolavolana ny iPhone 14 manaraka dia voasivana
Nanomboka nahazo hery ny tsaho ary nanondraka ny tambajotra sosialy tato anatin'ny andro vitsivitsy. Amin'ny lafiny iray, manana ny…
ny alex vincent hace 3 volana .
Araka ny tsaho vaovao mifototra amin'ny dikan'ny AutoCAD izay mety ho tafaporitsaka, ny iPhone 14, amin'ny modely Pro Max ...
Ny iPhone 14 dia hahita hazavana amin'ny volana septambra ho avy izao. Na dia mbola misy volana maro aza, ny tsaho…
iPhone 14 dia miditra amin'ny dingana fanamarinana injeniera, fakantsary periskope nahemotra amin'ny iPhone 15
ny Karim Hmeidan hace 3 volana .
Mbola ao anatin'ny telo volana voalohany amin'ny taona 2022 isika fa efa fantatrao fa ny vanim-potoanan'ny tsaho momba ny…
Ahoana ny fiasan'ny Dual SIM an'ny iPhone XS sy XS Max vaovao
Ahoana ny fomba fampidinana fampiharana amin'ny iPhone X
Ny tetika rehetra amin'ny iPhone X mba hahazoana tombony betsaka amin'izany
Ahoana ny fahitana ny isan-jaton'ny bateria amin'ny iPhone X
IPhone tsy misy serivisy? Andramo ireo vahaolana ireo
iPhone 6 vs. iPhone 7: famakafakana video ny tsy fitovizany
Ny tsy fitoviana eo amin'ny iPhone 5s sy ny iPhone SE
Ahoana ny fomba fanapahana karatra SIM hivadika SIM micro na SIM nano